Semalt विशेषज्ञ: वेब पार्सि ABS को रूपमा सजिलो
सबैले परिस्थितिको सामना गर्नुपर्‍यो जब आवश्यक जानकारीको ठूलो मात्रा स collect्कलन र व्यवस्थित गर्न आवश्यक पर्दछ। मानक कार्यहरूको लागि त्यहाँ रेडिमेड सेवाहरू छन् तर के भने यदि कार्य मामूली छैन र त्यहाँ कुनै समाधानहरू छैनन् भने के गर्ने? त्यहाँ दुई तरिकाहरू छन्: मैन्युअल तरिकाले सबै गर्नुहोस् र धेरै समय बर्बाद गर्नुहोस् वा नियमित प्रक्रिया स्वचालित गर्नुहोस् र परिणाम धेरै पटक छिटो प्राप्त गर्नुहोस्। दोस्रो विकल्प स्पष्ट रूपमा अझ राम्रो हुन्छ, त्यसैले हामी तपाईंलाई वेब पार्सरहरूको बारेमा केही जानकारी दिनेछौं।
वेब पार्सरले कसरी काम गर्छ?
वेब पार्सरमा कुन प्रोग्रामिंग भाषा लेखिएको हो, यसको कार्यको एल्गोरिथ्म त्यस्तै नै रहन्छ:
१. इन्टरनेट पहुँच गर्दै, वेब स्रोतको कोडमा पुग्न र यसलाई डाउनलोड गर्दै।
२. पढ्ने, निकाल्ने र डाटा प्रशोधन गर्ने।
Ext. एक्स्ट्र्याक्ट डाटा प्रयोगयोग्य फारममा प्रस्तुत गर्दै - .txt, .SQL, .xML, .html र अन्य ढाँचाहरू।
अवश्य पनि, वेब पार्सरहरूले वास्तवमा पाठ पढ्दैनन्, तिनीहरूले केवल प्रस्तावित शब्दहरूको सेटलाई इन्टरनेटमा फेला परेको कुरासँग तुलना गर्छन् र दिइएको कार्यक्रम अनुसार कार्य गर्दछन्। पार्सरले के पत्ता लगाउँदछ यसले कमाण्ड लाइनमा अक्षर, शब्द, अभिव्यक्ति, र कार्यक्रम सिन्ट्याक्सको स containing्केतहरूको सेट समावेश गरेर लेख्छ।
PHP मा वेब पार्सरहरू
PHP वेब पार्सरहरू सिर्जना गर्नका लागि धेरै उपयोगी छ - यसमा निर्मित लाइब्रेरी libcurl छ जुन स्क्रिप्टलाई कुनै पनि प्रकारको सर्भरहरूमा जडान गर्दछ, साथै https प्रोटोकोल (गुप्तिकरण जडान), ftp, टेलनेटसँग काम गर्नेहरू सहित। PHP ले नियमित अभिव्यक्तिहरूलाई समर्थन गर्दछ, जस मार्फत वेब पार्सरले डेटा प्रक्रिया गर्दछ। यसमा XML का लागि DOM लाइब्रेरी छ, एक्स्टेन्सिबल मार्कअप भाषा जुन सामान्यतया वेब पार्सरको कार्यको परिणाम प्रस्तुत गर्दछ। PHP HTML सँग राम्रोसँग जान्छ किनकि यो यसको स्वचालित जेनेरेटको लागि सिर्जना गरिएको हो।
पाइथनमा वेब पार्सरहरू
जे होस्, PHP लाई नपारि, प्रोग्रामिंग भाषा पाइथन एक सामान्य प्रयोजनको उपकरण हो (वेबको लागि एक विकास उपकरण मात्र होईन), यसले पार्सि excellent उत्कृष्ट तरिकाले ह्यान्डल गर्दछ। कारण भाषा आफैमा एक उच्च गुण हो।
पाइथनको सिन्ट्याक्स सरल, स्पष्ट छ, प्रायः अशुभ कार्यहरूको स्पष्ट समाधानमा योगदान गर्दछ। नतिजाको रूपमा, वेब पार्सि forका लागि धेरै स्थापना भएका पुस्तकालयहरू यस भाषाको साथ सिर्जना गरिएको छ।
नियमित अभिव्यक्ति पार्सि forका लागि प्रयोग गरिन्छ। यस प्रयोजनको लागि त्यहाँ एउटा पाइथन मोड्युल भनिन्छ, तर यदि तपाईंले कहिले पनि नियमित अभिव्यक्तिको साथ काम गर्नुभएको छैन भने, तिनीहरूले तपाईंलाई भ्रमित गर्न सक्छन्। भाग्यवस, त्यहाँ एक सुविधाजनक र लचिलो पार्सिंग उपकरण छ भनिन्छ Pyparsing। यसको मुख्य फाइदा यो हो कि यसले कोडलाई थप पढ्नयोग्य बनाउँदछ र विश्लेषण गरिएको पाठको अतिरिक्त प्रसंस्करण गर्न अनुमति दिन्छ।
सुन्दर सूप पाइथन वेब पार्सरमा एचटीएमएल / एक्सएमएल फाइलहरूको सिन्टेटिक पार्सिंगको लागि लेखिएको हो जुन गलत मार्कअपलाई पनि पार्स रूखमा रूपान्तरण गर्न सक्दछ। यसले पार्स रूखमा नेभिगेट गर्ने, खोजी गर्ने र परिमार्जन गर्ने सरल र प्राकृतिक तरिकाहरूलाई समर्थन गर्दछ। धेरै जसो केसहरूमा यसले घण्टा र कामको दिनहरू बचत गर्दछ।
तपाईंले वेब पार्सर र दुई प्रोग्रामिंग भाषाहरूको बारेमा केही आधारभूत जानकारी सिक्नुभयो जुन वेब पार्सर बनाउन र प्रयोग गर्नका लागि उपयोगी हुन्छ, साथै केही पुस्तकालयहरू जुन काममा आउँदछ। अवश्य पनि, त्यहाँ वेब पार्सिंगका लागि धेरै विकल्पहरू छन्, तर यी उदाहरणहरूले तपाईंलाई सुरू गर्न मद्दत गर्दछ।